Umhla My Pet » Ngubani Ukuba Hlawula ngomhla wokuqala – Advice For Men
Ngubani Ukuba Hlawula ngomhla wokuqala – Advice For Men
ukubuyekezwa: UCanzibe. 24 2020 | 3 min ukufunda
Abantu zonke iintlobo hang-ups xa kufikwa ukuthandana, kwaye mhlawumbi omnye iqhelekileyo exinezelekile okanye awunayo ngokuhlawula ngomhla. Amadoda esabela ngokwahlukileyo kule uxinzelelo. Abanye abantu basoloko ukuhlawula, kodwa ngokufihlakeleyo uzive embi ngaphakathi ngelixa ebhala itshekhi. Amanye amadoda kusithenga kwesiqingatha ngasinye abanye abantu okungenanto nomsindo ngayo. Amanye amadoda nje ngokwenene ukoyika ucinge endala lixesha ukuba abasifundisa ukuba ahlawule ityala.
Ndiyazi amadoda aya tyaba nje phandle ukwala ukuhlawula ngokupheleleyo ngomhla wokuqala, endaweni ngelithi lo oyilwayo kufuneka ukwahlula kanye kwisiqingatha. Ngoba? Ngenxa yokuba safumana amava amaninzi kangaka zihlawulela libe umhla eninzi kunye umfazi kuphela soze uve kuye kwakhona. Mhlawumbi kuye kwafuneka ukuba kwenzeke kuwe. Mhlawumbi ke umfazi oyithandileyo kwaye wacinga kwenu vibing kunye, oko enaqhumisela ukuhlawula, kuphela ukuba shwaka naye yaye akazange abuyele iifowuni zakho. Okanye mhlawumbi kuhlawulwa imihla emininzi boyilo okanye darned ekunene eyoyikekayo kwaye abayithandi. Yonke imali nzima-ezuzwe wayichitha. Ndize ukuba ngokwenene. Ngubani na kuziva isibetho!
Kula maxesha ukulingana kutheni umntu kulindeleka ukuba ngonyawo lonke iindleko oyilwayo nje kuba yena umntu? Abafazi bafuna ukulingana, kakuhle apha ke.
Makhe ndinixelela imfihlelo kancinane. Ukuba oku ukuba, kwaye ligxininisa ngokuhlawula isiqingatha yakhe ngomhla wokuqala, oku kuya agxothe nayiphi esemgangathweni umfazi esobukhomokazi. Uyabona ndifundisayo abafazi bam abathengi babe kumandla esobukhomokazi ngeenxa amadoda ukuba uthandana, esisebenza ngcono ngaloo ndlela. Oku kuthetha ukufumana lathi nangokuvumela umntu omthandayo wakhe. Awukwazi zombini kuba amandla akho oliduna, ngenye romance ayikwazi kutyatyamba. Bekuya kuba ngaphezulu kufana ngokuthandana iqabane lakho, ngubani ngokucacileyo NGABA ahlawule isiqingatha ityala. Ngoko ke ngexa Ndiyayiqonda inkxalabo yakho, Ndiyawuncoma liyaqhubeka ukwenza into gentlemanly nomnikelo ukuhlawula. Umfazi quality bazakuyivuyela ngokwenene kuba.
Kwaye musa kuphela ukwenza oko abafazi ungathanda ukuba. Ukuhambisa ukuhlawula WONKE umhla. Ngaphandle kwenyaniso yokuba le fom nje kakhulu elungileyo kunye nembeko, iphela usijongile kwaye wenza into entle. Oku kuya kubonwa.
Mna kanye ngomhla ukuba uza kakuhle. Kodwa ekupheleni loo mfo inguwona phandle ikhaltyhuleyitha ukuze ahlulelana oyilwayo kanye njengoko abo ukuba badle, basele (kakuhle Ndicinga ukuba ikhalityhuleyitha efowunini kodwa sekunjalo). Ngokukhawuleza njengoko oku kwenzeka ndaziva zonke akutsalwa mna ngaphambili sele uziva umsele kunene kum. WOWU! Andinakuze cinga nje nomntu ofana nalo – Ukuba ufana ngoku ucinge into ebeya kufana ukuhlala! Ngaba unokuyithelekelela shopping in Ikea zefanitshala? Kuthekani ngomhla wokuzalwa kwam, kuza kufuneka ahlawule isiqingatha ngoko kakhulu? Hayi uthando kakhulu.
Kuphephe ukuba nokuva uhlawula nje ochwayithileyo ngayo. Kwi Nezibugqagala bokomisa ukuthandana, abanye abafazi uthathe izakulahleka kwaye angabuyi iifowuni zakho. Yinto ndawoni kwi zifundo. Ndiyafunga ukuba wenze okufanayo umntu kwindawo ethile kumgca ukuba unyanisekile ngenkohlakalo kwisiqu. nokuba, xa lady yakho abanokuvela, uze wenze azive ezizodwa kunye nokudala romance kuba ndanyusa ukuhlawula, baya kuphela kule inqaba atha-, kodwa ke nobaqonda kuwe ngenxa olomeleleyo, umntu oliduna wena.
Ngoko ndithi musani ukubuxhalela yaluphele lixesha - makhe ukulumela ngokuqinileyo chivalry, romance nangomdla. Kutheni vuxa nje kamnandi nibuyise kumfazi ngokwenza le nto nobubele kuye, ufuna nokuba kwakhona okanye ukumbona. Unako ke ngoko bayive indlela ukwazi ukuba esifanelekileyo, ukusebenza ngokupheleleyo yaye indoda ayingaphandle, ngubani ungakhetha ukunyanga umfazi, kuba nje unako. ndiziva ndinelunda.